Usesgbọ Ohaneze na Kocaeli Pes Dedirtti | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliUsesgbọ Ohaneze na Kocaeli Pes Dedirtti
24 / 09 / 2019 41 Kocaeli, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Mpaghara Marmara, Turkey
A nyochasịrị ndị ọrụ bọs ahụ
Obodo Kocaeli na-aga n'ihu na nyocha ya maka ụgbọ ala ọha nkeonwe. N'ọnọdụ a, iji mee njem nke ọma nke ụmụ amaala ejidere na ngwa nyocha Gebze kwụsịrị.
AHA EGO EGO
Ngalaba na-ahụ maka njem na njikwa okporo ụzọ Kocaeli na Kocaeli na ngalaba nke ngalaba na-ahụ maka nyocha ndị a mere nyocha zuru oke nke ụgbọ ala ọha na ndị mmadụ na Gebze. Na nyocha ndị metụtara, a na-enyocha ụgbọ ala ọha nke 66. Ndi Kocaeli Obodo na ationgbọ njem na ngalaba nchịkwa okporo ụzọ nke ndị otu na-enyocha, akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala na kaadị ọkwọ ụgbọala yana akwụkwọ ụgbọala. Ndị otu ngalaba na-ahụ maka okporo ụzọ mere nyocha nke ụgbọ ala na nchịkwa mmanya.
A tara ụgbọ elu ọha nke 66 si na 12 ahụhụ. Nyocha nke ụgbọ ala 7, koodu ejiji ala nke 2, akwụkwọ ọrụ ndị ọrụ ụgbọ ala 1, ngwa ọrụ ndị na-abụghị iwu nchịkwa ụgbọala nke 1 anaghị agbaso usoro iwu maka ntaramahụhụ ahụ.
Busfọdụ bọs ndị mmadụ na-eji eme ihe akpọrọ site na ihe ndị ahụ tụrụ ndị otu ahụ n'anya. N'ime nyocha ahụ, achọtara mma akpa, mma, mkpisi, batrị baseball na grail ntu.
Ndị na-enyocha ihe ga-aghọrọ ya
Ngalaba Metrogbọ njem na Njikwa okporo ụzọ nke Kocaeli nke ndị otu nyocha, ọkachasị n'ụkpụrụ nke ụkpụrụ, ọkachasị mgbe ndị njem ụgbọ mmiri na-enyocha ọrụ, ọkachasị igbochi njem ụgbọ mmiri ga-aga n'ihu nyocha ngwa ngwa.
Ntinye aka nke onye ọkwọ ụgbọala na Autism na Kocaeli mmadụ…
Ụgbọ njem ụgbọ njem na-adịghị anwụ anwụ
Usoro ụgbọ elu ga-eme ka mkpọsa nke BUTTİM rụọ ọrụ
Nkume Nkume na Nostalgic Tram Rails na Istiklal
Obere nyocha na Taksim eweghachiri
Obere nyocha na Taksim kwụsịrị oge mmalite
Oge Nkwuputa: Diyarbakır Kurtalan Line KM: 8 + 298 na N
Nleta ịre ahịa: Balıkesir Çandır Line Km: 260 + 438 eki
Usesgbọ ala ọha
Usesgbọ ala Kocaeli